Qoraaga caanka ah ee Shakespeare kumuu ahaa - BBC News Somali
Qoraaga caanka ah ee Shakespeare kumuu ahaa
Kooxda masraxa shakespear ee caalamiga ah ee magaalada London oo habeenkii khamiistii riwaayad ka mid ah kuwii shakespear ka dhigay magaalada hargeysa ayaa sheegay in socdaalkooda oo soo bilaabmay 23-dii bishii afraad ee labadakun iyo afar-iyo-tobanka in ay ku marayaan dhammaan dalalka caalamka muddo laba sano ah oo ku eg ilaa 2016.
Haddaba shakespear kumuu ahaa ?. Maxay riwaayadihiisii iyo gabayadiisii oo laga jooga hadda dhawr boqol oo sano ay u noqdeen kuwo ilaa hadda laga dhigo caalamka oo aan duugoobin ?. Maxaase riwaayada shakespear qofka soomaaliga ahi ka korodhsan karaa?.
Weriyaha BBC ee Hargeysa Axmed Saciid Cige ayaa jawaabta su'aalahaasi iyo kuwo kaleba hor dhigay Professor Cabdisalaam Yaasiin oo ku takhasusay luqada ingiriisida iyo suugaanteeda , haatana ah gudoomiye ku xigeenka jaamicadda Hargeysa.
wuxuuna ugu horeyn ka jawaabayaa waa kuma shakespear.